iPhone yakakiiwa neIMEI - tsvaga kana iPhone yabiwa
iPhone rakakiyiwa ne IMEI
Pane ino peji iwe unogona tsvaga kana iPhone yakavharwa neIMEI. KANAn iPhone inogona kukiyiwa neIMEI nekuti ndizvo chakabiwa, yarasika kana nekuda kwechikwereti neanoshanda.
Tarisa kana vari kukutengesera yakataurwa iPhone usati watenga. IMEI-yakavharwa iPhones haigone kushandiswa nechero mutakuri uye muzviitiko zvakawanda haigone kuvhurwa.
0.1 IPhone yakavharwa kana kubiwa?
1 Kuziva sei kana iPhone yabiwa
2 Unogona kuvhura iyo iPhone yakavharwa neIMEI?
IPhone yakavharwa kana kubiwa?
Shandisa inotevera fomu kuti uone kana iyo iPhone yakavharwa kana kuti yakabiwa:
Iwe uchagamuchira iyo yese data reiyo iPhone mune iyo email inosanganisirwa neako Paypal account kana iyo email iwe yaunonyora kana iwe uchibhadhara nekadhi rechikwereti. Kazhinji iwe unogashira ruzivo mukati memaminitsi mashanu kusvika gumi nemashanu, asi mune zvimwe zviitiko panogona kuve nekunonoka kunosvika kumaawa matanhatu.
IMEI yakamisikidzwa seyakabiwa / yakarasika muApple database: Kwete / Hongu
Zvakare kana iwe uchida iwe unogona zvakare kutarisa kana chiri yakavharwa neICloud, kubva kukambani iri iPhone yako, kana iine chibvumirano chechigarire uye kana zvichigona kudaro kiinura ne IMEI Nokusarudza iyo sarudzo mune yekudonhedza-yekubhadhara, iwe unongofanira kubhadhara zvishoma kuti uwedzere ruzivo urwu.
Kuziva sei kana iPhone yabiwa
Izvo zvakakosha kuti kana tichitenga chechipiri-ruoko rweApple iPhone chishandiso isu tinowana zviri nyore kana iyi iPhone yakavharwa neMEI. Chikonzero chikuru nei makambani achisarudza kuvharidzira nharembozha kuburikidza neiyo IMEI kodhi iri nekuti muridzi wayo akaiisa zvisiri izvo kana kuti zvisiri pamutemo. Ndosaka tichifanira kuve nechokwadi nezvechokwadi cheiyo IMEI kodhi yakabatana nechinhu, nekudaro tichisimbisa kuti kwayakatangira zviri pamutemo zvachose.
Ndosaka sevhisi yatinopa ichizokutendera iwe kuti uzive mune inguva pfupi kuti kana iyo iPhone yauri kuronga kutenga ndeye IMEI yakavharwa. Nekudaro kudzivirira zvinogona kubiridzira uye kutora kwechigadzirwa chine mavambo asiri pamutemo.
Unogona kuvhura iyo iPhone yakavharwa neIMEI?
Kazhinji, iwo makambani efoni ane simba rekukiya uye kuvhura michina kuburikidza neiyo IMEI kodhi. Ndosaka, kana tichida kuvhura iyo iPhone yakambovharirwa neIMEI, tichaenda takananga kukambani yenhare inoona nezve blockade, kusimbisa zviri pamutemo kuti mudziyo wawanikwa uye uri mumaoko emuridzi wawo zviri pamutemo, semuenzaniso, unogona kushandisa invoice dzekutenga dzakakodzera.
Ndezve zvataurwa pamusoro, kuti isu tinopa sevhisi iyi iyo inokupa iwe mukana wekuziva ipapo ipapo kana iyo iPhone yauronga kutenga yakavharwa kuburikidza neIMEIIngo zadza ruzivo rwunoenderana neiyo IMEI kodhi yechinhu chaunoda kutenga mune inotevera fomu, pamwe neemail iyo yaunoda kugashira mhinduro mhinduro umo iwe uchazoziva mamiriro eiyo IMEI block. Chete nekuzadza iyo data pane fomu ndipo paunogamuchira email nerevo yedata rakakumbirwa mukati memaminitsi gumi nemashanu (mune zvimwe zviitiko zvinogona kunonoka kusvika kumaawa matanhatu).